လုယက်မှု – Page2– Eleven Media Group
ရန်ကုန်မြို့တွင်း အငှားယာဉ်ကို အသုံးပြုပြီး လုယက်မှုများ ကျူးလွန်နေသည့် အမျိုးသားခြောက်ဦးအား ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း ဖေဖော်ဝါရီ ၂၁ ရက်တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ သိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ အလုံမြို့နယ်နေ ကို…… သည် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၇ ရက် နံနက် ၅ နာရီက ၎င်း၏ ညီဖြစ်သူနှင့်အတူ အလုံမြိုနယ်၊ အာရှတော်ဝင်ဆေးရုံအနီးမှ ထမင်းကြော်စားပြီး ပြန်လာစဉ် အငှားယာဉ်တစ်စီးမှာ ၎င်းတို့အနီးသို့ ရောက်ရှိလာပြီး အဆိုပါယာဉ်ပေါ်မှ အမျိုးသားနှစ်ဦး ဆင်းလာကာ ကို…. ၏ လက်ထဲတွင်ကိုင်ထားသည့် ဖုန်းအား လုယက်ယူဆောင်ကာ ယာဉ်အားမောင်းနှင် ထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ထိုသို့ လုယက်ခံခဲ့ရသဖြင့် ကို….. မှ သက်ဆိုင်ရာ အလုံမြို့မရဲစခန်းသို့ သွားရောက်တိုင်တန်းခဲ့ပြီး ရဲစခန်းက (ပ) ၅၉/၂၀၁၈၊ ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၃၈၂ ဖြင့် အမှုဖွင့်ခဲ့ပြီး ကျူးလွန်သူများအား ဖမ်းဆီးရမိရေး ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဆောင်ရွက်ရာ လုယက်မှုကျူးလွန်ရာတွင် အသုံးပြုခဲ့သည့် ယာဉ်မှာ CC /—- Nissan AD Van အမျိုးအစားယာဉ် ဖြစ်ကြောင်းသိရပြီး အဆိုပါယာဉ်ကို ဖေဖော်ဝါရီ ၁၇ ရက် ည ၈ နာရီက ဗဟန်းမြို့နယ်၊ မြန်မာပလာဇာရှေ့တွင် တွေ့ရှိခဲ့ပြီး လုယက်မှု ကျူးလွန်ခဲ့သည့် ယာဉ်မောင်းဖြစ်သူ တောင်ဒဂုံမြို့နယ်နေ အောင်နိုင်မျိုး(၂၆)နှစ်နှင့် ဗဟန်းမြို့နယ်နေ ဝေယံ (၂၀) နှစ်ဆိုသူတို့အား ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ထို့နောက် ၎င်းတို့အား စစ်ဆေးရာ ပြစ်မှုကျူးလွန်ရာတွင် သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်နေ ထက်ပိုင်လင်း (၁၆) နှစ်၊ ဇွဲပြည့် (၁၆) နှစ်၊ ထန်းတပင်မြို့နယ်နေ စွမ်းထက်ပိုင် (၁၈)နှစ်၊ တာမွေမြို့နယ်နေ ဂွတို (၂၁) နှစ်တို့ ပါဝင်ကြောင်း သိရပြီး ၎င်းတို့ကို သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်များ အသီးသီးတွင် ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
စစ်ဆေးရာ ၎င်းတို့သည် ကျူးလွန်ရာတွင် အသုံးပြုခဲ့သည့် အငှားယာဉ်ကို တစ်လလျှင် ကျပ်နှစ်သိန်းခွဲဖြင့် ငှားရမ်းခဲ့ကြောင်း နှင့် အဆိုပါအမှုကို ၎င်းတို့ ကျူးလွန်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့ပြင် ၎င်းတို့ ခြောက်ဦးသည် ငယ်ကောင်(စုံစမ်းဆဲ)၊ ထက်ဝေယံ (စုံစမ်း ဆဲ)ဆိုသူတို့နှင့်အတူ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃ ရက် ညပိုင်းကလည်း ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ဗိုလ်ချိုရပ်ကွက်၊ ဖိုးစိန်လမ်းတွင် အမျိုးသားတစ်ဦးထံမှ ဖုန်းတစ်လုံးကိုလည်း လုယက်ခဲ့သည်ဟု စစ်ဆေးပေါ်ပေါက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ထိုသို့ ပေါ်ပေါက်ချက်များအရ ၎င်းတို့အား သက်ဆိုင်ရာ ရဲစခန်းအသီးသီးတွင် အမှုများရေးဖွင့်ကာ အရေးယူရန် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး လွတ်မြောက်နေသူနှစ်ဦးအား ဖမ်းဆီးရမိရေး ဆက်လက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
Posted in NewsTagged လုယက်မှုLeaveaComment on ရန်ကုန်မြို့အတွင်း အငှားယာဉ် အသုံးပြုပြီး လုယက်မှုများ ကျူးလွန်နေသူ ခြောက်ဦးအား ဖမ်းဆီးရမိ
ဒဂုံမြောက်မြို့နယ်တွင် စက်ဘီးစီးနင်းနေသည့် အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏ လက်ကိုင်ဖုန်းအား အမျိုးသားနှစ်ဦးက ဆိုင်ကယ်စီးပြီး လုယက်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ဇန်န၀ါရီ ၂၆ ရက်တွင် စုံစမ်းသိရသည်။
ဒဂုံမြောက်မြို့နယ် ၄၇ ရပ်ကွက်နေ မ… (၂၆နှစ်) သည် အစ်မဖြစ်သူနှင့်အတူ ဇန်န၀ါရီ ၂၅ ရက် ည ၈ နာရီတွင် ယင်းမြို့နယ်၊ ၄၆ ရပ်ကွက်ရှိ Gym (အားကစားခန်းမ) မှ စက်ဘီးစီးပြီး ပြန်လာခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းသို့ ပြန်လာစဉ် အဆိုပါ Gym (အားကစားခန်းမ) အကျော် အရောက်တွင် ဆိုင်ကယ်တစ်စီးက အနောက်သို့ ရောက်လာကာ မ….(၂၆နှစ်) လွယ်ထားသည့် Iphone 7plus အမျိုးအစား လက်ကိုင်ဖုန်း ထည့်ထားသည့် အိတ်အား လုယူထွက်ပြေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
“အစ်မနဲ့ Gym ကနေ ပြန်လာတာ။ တစ်ယောက်ကို စက်ဘီးတစ်စီးစီနဲ့။ Gym က ထွက်လာတော့ ဆိုင်ကယ်တစ်စီးနဲ့ အမျိုးသားနှစ်ဦးကို တွေ့တယ်။ Gym ကျော်ကျော်လည်း ရောက်ရော အဲဒီဆိုင်ကယ်က အနောက်က မောင်းလာတယ်။ အစက တိုက်မိမလိုဖြစ်လို့ ရှောင်ပေးထားတာ။ ဒါပေမဲ့ ဆိုင်ကယ်စီးလာတဲ့သူက ကျွန်မလွယ်ထားတဲ့ အိတ်လေးကို လုယူသွားတယ်။ အိတ်ထဲမှာက ဖုန်းတစ်လုံးပဲ ပါတာပါ” ဟု ဖုန်းအလုခံရသည့် မ …..(၂၆)နှစ်က ပြောကြားသည်။
လုယက်ခဲ့သည့် ဆိုင်ကယ်ပေါ်မှ အမျိုးသားတစ်ဦးမှာ လူငယ်ပိုင်းဖြစ်ပြီး အခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာမှာ မီးမှောင်ပြီး လူအသွားအလာ နည်းကြောင်း သိရသည်။
“ဖြစ်တဲ့နေရာက မီးနည်းနည်းမှောင်တယ်။ ကျွန်မလည်း အလုခံရတော့ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကို အကူအညီ တောင်းတယ်။ ပြီးတော့ စက်ဘီးနဲ့လည်း သူတို့နောက်ကလိုက်တာ မမီတော့ဘူး။ ရဲစခန်းတော့ မတိုင်ရသေးပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ နယ်ထိန်းကိုတော့ ကျွန်မ မိဘတွေက အကြောင်း ကြားထားတယ်” ဟု ဖုန်းအလုခံရသည့် မ…..(၂၆နှစ်) က ပြောကြားသည်။
ဖြစ်စဉ်မှ ကျူးလွန်သူအား သက်ဆိုင်ရာ ရဲစခန်းမှ ဖမ်းဆီးရမိရေး ဆောင်ရွက်နေကြောင်း သိရသည်။ ရန်ကုန်မြို့တွင် တရားမ၀င် ဆိုင်ကယ်စီးနင်းမှု များပြားလာပြီး လုယက်မှုများတွင်လည်း ဆိုင်ကယ်များကို အသုံးပြုလျက်ရှိသည်။
Posted in CrimeTagged ရန်ကုန်, လုယက်မှုLeaveaComment on ဒဂုံမြောက်မြို့နယ်တွင် စက်ဘီးစီးနေသည့် အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏ လက်ကိုင်ဖုန်းအား ဆိုင်ကယ်စီးလာသည့် အမျိုးသားနှစ်ဦးက လုယက်မှုဖြစ်ပွား
Posted in InternationalTagged လုယက်မှုLeaveaComment on ပါရီရှိ ကမ္ဘာကျော် Ritz ဟိုတယ်မှ ဒေါ်လာ ၄ ဒသမ ၇၅ သန်း တန်ဖိုးရှိ လက်ဝတ်ရတနာများ လုယူခံရ
အခင်းဖြစ်ပွားခဲ့သည့် တိုက်အား တွေ့ရစဉ်
တာမွေမြို့နယ် ဇဋိလလမ်းရှိ နေအိမ်တိုက်ခန်းလှေကားတွင် အဘွားအိုတစ်ဦး၏ ရွှေဆွဲကြိုးအား လုယက်ခဲ့သည့် အမျိုးသမီးတစ်ဦးအား ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဇန်န၀ါရီ ၉ရက် နံနက် ၉ နာရီခန့်တွင် တာမွေမြို့နယ် မလွှကုန်းဌေးကြွယ် (က) ရပ်ကွက်နေ အသက် ၇၀ ကျော် အဘွားအိုတစ်ဦးသည် ဈေးတစ်ခုမှ ၎င်းနေထိုင်သည့် နေအိမ်တိုက်ခန်းသို့ ပြန်လာခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဘွားအိုဈေးမှ ပြန်လာသည့်အချိန်တွင် လုယက်ခဲ့သည့်အမျိုးသမီးမှာ လှေကားထိပ်၌စောင့်ကာ လုယက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ယင်းဖြစ်စဉ်အား မျက်မြင်တွေ့ရှိခဲ့သူများ၏ ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။
ထို့နောက် ရွှေဆွဲကြိုးလုယက်ခဲ့သည့် အမျိုးသမီးမှာ တိုက်အောက်သို့ ဆင်းပြေးခဲ့ကြောင်း၊ လုယက်ခဲ့သည့် ရွှေဆွဲကြိုးအား ၀ှက်ထားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
“သူက လှေကားပေါ်မှာ စောင့်နေတာ။ အဲဒီတိုက်မှာနေတဲ့ အန်တီကြီးက ဈေးကပြန်လာတဲ့အချိန်မှာ သူက အန်တီကြီးကို ဆောင့်တွန်းပြီး ဆွဲကြိုးကိုလုတာ။ ပြီးတော့ အောက်ကိုဆင်းလာတယ်။ ဆင်းလာပြီး အဲဒီနားက မုန့်ရောင်းတဲ့ ဆိုင်အသေးလေးနားကို ၀င်ထိုင်နေတယ်။ ပြီးတော့ သူကလုလာတဲ့ ဆွဲကြိုးကို အဲဒီနားက အုတ်နီခဲအောက်လေးမှာ ၀ှက်ထားတယ်” ဟု အခင်းဖြစ်ပွားရာအနီး ပတ်ဝန်းကျင်နေသူတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
ရွှေဆွဲကြိုး လုယူခံရသည့်အချိန်တွင် အဘွားအိုမှာ အော်ဟစ်ပြီး ပတ်ဝန်းကျင်သို့ အကူအညီတောင်းခံခဲ့ကြောင်း အခင်းဖြစ် ၀န်းကျင်တွင် နေထိုင်သူများထံမှ သိရသည်။
“မိတယ်ဆိုတာက အဲဒီတိုက်အောက်က အမျိုးသမီးတစ်ယောက် ကောင်းလို့ပါ။ သူက ဆွဲကြိုးလုတဲ့ အမျိုးသမီးကို အဲဒီတိုက်ပေါ်က ဆင်းလာတာ နင်ပဲရှိတယ်ဆိုပြီး ပြောနေတာ။ အဲဒီလို ပြောနေချိန် ပတ်ဝန်းကျင်မှာ လူများသွားပြီးတော့ သက်ဆိုင်ရာစခန်းက ရဲတပ်ဖွဲ့တွေ ရောက်လာတယ်။ ပြီးတော့ ဆွဲကြိုးလုတဲ့သူကိုလည်း စခန်းကခေါ်သွားတယ်။ ပြီးတော့ ဆွဲကြိုးကိုလည်း အဲဒီနားက အုတ်နီခဲအောက်မှာ ပြန်တွေ့တယ်” ဟု အခင်းဖြစ်စဉ်အား မျက်မြင်တွေ့ရှိခဲ့သူတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
ဆွဲကြိုးလုယူခံရသည့် အဘွားအိုမှာ အလုခံရချိန်တွင် ဆောင့်တွန်းခံလိုက်ရသဖြင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာ အနည်းငယ်ရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
“ပတ်ဝန်းကျင်က ၀ိုင်းဝန်းဖမ်းဆီးပေးပါတယ်။ အခုတော့ ဆက်လက်ဆောင်ရွက် စရာရှိတာကို ဆောင်ရွက်နေပါတယ်” ဟု တာမွေမြို့မရဲစခန်းမှ တာဝန်ကျရဲအရာရှိတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
ရွှေဆွဲကြိုးလုယက်ခဲ့သည့် အမျိုးသမီးမှာ တာမွေမြို့နယ်အတွင်းရှိ ဈေးတစ်ခုတွင် ဈေးရောင်းချသည်ဟု အနီးပတ်ဝန်းကျင်နေသူများထံမှ သိရသည်။ အဆိုပါဖြစ်စဉ်အား တာမွေမြို့မရဲစခန်းမှ အမှုဖွင့်ဆောင်ရွက်နေကြောင်း သိရသည်။
ရန်ကုန်မြို့တွင် လုယက်မှုများ မကြာခဏ ဖြစ်ပွားလျက်ရှိပြီး တိုက်ခန်းများတွင် နေထိုင်သူများအနေဖြင့် မိမိတိုက်လုံခြုံရေးအား ဂရုတစိုက် ဆောင်ရွက်ရလျက်ရှိကြောင်း တိုက်ခန်းတွင် နေထိုင်သူများက ပြောကြားသည်။ အများဆုံးလုယက်ခံရသည့် ပစ္စည်းများမှာ လက်ကိုင်ဖုန်းများဖြစ်ပြီး ဒီဇင်ဘာလပိုင်းကလည်း စမ်းချောင်းမြို့နယ်တွင် မိမိတိုက်ခန်းသို့ ပြန်လာသူအမျိုးသမီးတစ်ဦးမှာ နေအိမ်တိုက်ခန်းအနီးအရောက်၌ ခေါင်းကို အုတ်နီခဲဖြင့် အထုခံရပြီး လက်ကိုင်ဖုန်း လုယက်ခံခဲ့ရသည်။
Posted in NewsTagged လုယက်မှုLeaveaComment on တာမွေမြို့နယ် ဇဋိလလမ်းရှိ နေအိမ်တိုက်ခန်းလှေကား၌ အဘွားအိုတစ်ဦး၏ ရွှေဆွဲကြိုးကို လုယက်သည့် အမျိုးသမီးအား ဖမ်းဆီးရမိ
Posted in Crime, NewsTagged လုယက်မှုLeaveaComment on ခရီးသည်ထံမှ ရွှေထည်နှင့် ငွေများလုယက်သည့် ယာဉ်မောင်းပါ နှစ်ဦးအား ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးရာ ၎င်းတို့မှာ လုယက်မှုများစွာ ကျူးလွန်ထားကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိ
ဒဂုံမြို့နယ်၌ လမ်းသွားလမ်းလာ အမျိုးသားတစ်ဦးကို အုတ်ခဲဖြင့်ထု၍ ဖုန်းနှင့် ငွေများ လုယက်သည့် လူငယ်အဖွဲ့အား ဖမ်းဆီးရမိကြောင်း ဒီဇင်ဘာ ၁၅ ရက်တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှ စုံစမ်းသိရှိရသည်။
ဒဂုံအရှေ့မြို့နယ်နေ ကို….သည် ဒီဇင်ဘာ ၁၁ ရက် နံနက် ၃ နာရီခွဲခန့်တွင် ဗဟန်းမြို့နယ်ဘက်မှ ဒဂုံမြို့နယ်ဘက်သို့ လမ်းလျှောက်လာစဉ် ဒဂုံမြို့နယ် ဘုရားကြီးရပ်ကွက် ကမ္ဘာအေးစေတီလမ်း အမှတ် (၁)မော်တော်ယာဉ်ဝင်း အရှေ့အရောက်၌ အနောက်မှ စက်ဘီးနှစ်စီးကို စီးနင်းလာသည့် အမျိုးသားလေးဦးက စက်ဘီးပေါ်မှဆင်းလာပြီး ၎င်းတို့အနက် နှစ်ဦးက ကို….. အား ချုပ်ကိုင်ကာ တစ်ဦးက အုတ်ခဲဖြင့် ဦးခေါင်းကိုထုရိုက်၍ ပါသည့်အရာများကို အားလုံးထုတ်ရန် ပြောဆိုခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းနောက် ကို…..ထံမှ လက်ကိုင်ဖုန်းတစ်လုံး၊ ကျပ် ၃၀၀၀၀ ထည့်ထားသည့် ပိုက်ဆံအိတ်နှင့် အခြားပစ္စည်းများပါ ကျောပိုးအိတ်တစ်လုံးကို လုယူထွက်ပြေးသွားခဲ့ပြီး ကို….မှာ ဦးခေါင်း၌ရရှိသော ဒဏ်ရာများကြောင့် ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးတွင် ဆေးကုသမှု ခံယူခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကို ဒဂုံမြို့မရဲစခန်းသို့ တိုင်တန်းခဲ့ပြီး (ပ) ၁၈၉ /၂၀၁၇၊ ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၃၉၄ ဖြင့်အမှုဖွင့်ကာ ကျူးလွန်သူများအား ဖမ်းဆီးရမိရေး ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
“အမှုဖွင့်ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ ရဲလုပ်ငန်းစဉ်တွေအတိုင်း ကျူးလွန်သူတွေကို ဖမ်းဆီးရမိဖို့ စုံစမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီလိုဆောင်ရွက်ပြီး ကျူးလွန်သူတွေဟာ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မှာနေကြတဲ့ လူငယ်တွေလို့ သိရပြီး ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေတယ်လို့ သိရတယ်။ သူတို့ကိုတော့ ဒီဇင်ဘာ ၁၃ ရက် နံနက် ၇ နာရီလောက်မှာ သန်လျင်၊ နတ်စင်ကုန်းရပ်ကွက်ထဲကနေ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်” ဟု အနောက်ပိုင်းခရိုင် ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ရဲအရာရှိတစ်ဦးက ဒီဇင်ဘာ ၁၅ ရက်က ပြောကြားသည်။
အဆိုပါ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည့် မှတ်ကြီး (ခ)ဇေယျာမောင်၊ မျိုးမြင့်အောင်၊ မျိုးကို၊ ကတုံး (ခ) ကိုဖြိုးတို့အား စစ်ဆေးရာ ၎င်းတို့သည် မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် သာယာကုန်းရပ်ကွက်ရှိ စည်ပင်ဝန်ထမ်းအိမ်ရာမှ စာကလေးဆိုသူနှင့်အတူ စက်ဘီးများစီး၍ ထွက်လာခဲ့ကြောင်း၊ ကျူးလွန်သည့်နေရာတွင် ကျောပိုးအိတ်လွယ်လာသူ အမျိုးသားတစ်ဦးကိုတွေ့ရပြီး ၎င်းထံမှ လုယက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကာ စာကလေးက ဦးခေါင်းအား အုတ်ခဲဖြင့် ထုရိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ထွက်ဆိုခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ စစ်ဆေးပေါ်ပေါက်ချက်အရ မှတ်ကြီးပါလေးဦးကို ဆက်လက်စစ်ဆေးနေပြီး သက်သေခံပစ္စည်းများကိုလည်း ပြန်လည်သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ကာ ကျူးလွန်ရာတွင် ပါဝင်သည့် တိမ်းရှောင်နေသူ စာကလေးကို ဖမ်းဆီးရမိရေး ဆက်လက် ဆောင်ရွက်နေကြောင်း သိရသည်။
Posted in Crime, NewsTagged လုယက်မှုLeaveaComment on ဒဂုံမြို့နယ်၌ လမ်းသွားလမ်းလာ အမျိုးသားတစ်ဦးကို အုတ်ခဲဖြင့်ထု၍ ဖုန်းနှင့် ငွေများ လုယက်သည့် လူငယ်အဖွဲ့အား ဖမ်းဆီးရမိ
Posted in Crime, NewsTagged လုယက်မှုLeaveaComment on လှိုင်မြို့နယ် တက္ကသိုလ်နယ်မြေ၀င်းအတွင်း စီးပွားရေးတက္ကသိုလ် ကျောင်းသူတစ်ဦး ရွှေဆွဲကြိုး လုယက်ခံရလှိုင်မြို့နယ် တက္ကသိုလ်နယ်မြေ၀င်းအတွင်း စီးပွားရေးတက္ကသိုလ် ကျောင်းသူတစ်ဦး ရွှေဆွဲကြိုး လုယက်ခံရ
Posted on September 5, 2017 by Eleven Media Group
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရှိ Farmer Money Changer ဆိုင်တွင် လုယက်ရန် အကြံအစည်ဖြင့် သေနတ်ဖြင့် ပစ်ဖောက်ထွက်ပြေးသူ နှစ်ဦးနှင့် သေနတ်ယူဆောင် ရောင်းချပေးသူ နှစ်ဦးတို့အား ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့က ရက် ၃၀ အတွင်း ဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်း Yangon Police ၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ သြဂုတ်လ ၅ ရက်နေ့ နံနက် ၈ နာရီခွဲအချိန်ခန့်က မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ အမှတ် ၅ ရပ်ကွက်၊ ပြည်လမ်းနှင့် ယိုးဒယားလမ်းထောင့်ရှိ Farmer Money Changer ဆိုင်တွင် ဝန်ထမ်း မအိအိဝင်းအား အမျိုးသား ၂ ဦးက အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၀ ကို မြန်မာငွေနှင့် လဲလှယ်ပေးရန်ပြောဆိုသဖြင့် ကျသင့်ငွေ မြန်မာငွေ ၄၀၈၀ဝ ကျပ်အတွက် ၄၁၀ဝ၀ ကျပ်ပေးလိုက်ပြီး ပိုငွေ ၂၀ဝ ကျပ် ပြန်လည်တောင်းယူရာ အမျိုးသားတစ်ဦးက သေနတ်ထုတ်ပြပြီး ငွေလွှဲကောင်တာတံခါး ဖွင့်ခိုင်းစဉ် အခြားအမျိုးသမီးဝန်ထမ်း တစ်ဦးမှ ဆိုင်အတွင်း ထွက်ပြေးသွားသဖြင့် သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်ခဲ့ရာ ဆိုင်အတွင်းရှိ ဘုရားပန်းချီကားကိုထိမှန်ပြီး ပြစ်မှုကျူးလွန်သူ အမျိုးသား ၂ ဦးတို့မှာ ဆိုင်ကယ်ဖြင့် ထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြောင်း တိုင်တန်းချက်အရ မရမ်းကုန်းမြို့မ ရဲစခန်း(ပ)၆၅၉/၂၀၁၇၊ ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၃၀၇/၃၉၃/၄၂၇/၁၁၄ ဖြင့် အမှုဖွင့် စုံစမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အမှုမှတရားခံ အမြန်ဆုံး ဖော်ထုတ်ရရှိရေးအတွက် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှူး၏ တိုက်ရိုက်ကွပ်ကဲ အနီးကပ်ညွှန်ကြားမှုဖြင့် အမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများကို အသေးစိတ် ညွှန်ကြားခဲ့ပြီး အနောက်ပိုင်းခရိုင် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးပါဝင်သော အထူးအမှုစစ်အဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းတာဝန် ပေးအပ်ခဲ့ပြီး အထူးအမှုစစ်အဖွဲ့မှ အခင်းဖြစ်ရပ်သို့ သွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့ရာ အခင်းဖြစ်ရပ်တွင် ကျန်ရစ်ခဲ့သော သဲလွန်စ အထောက်အထားအဖြစ် ၇.၆၅ ကျည်ခွံတစ်ခု၊ ကျည်ထိပ်ဖူးတစ်ခုနှင့် လက်လုပ် Silencer အပိုင်းအစဟု ယူဆရသော ပစ္စည်းအပိုင်းအစများ၊ ကျည်ဆံထိမှန် ထားသော ဘုရားပုံပန်းချီကားချပ်တို့ကို တွေ့ရှိသိမ်းဆည်းခဲ့ပြီး အခင်းဖြစ်စဉ်က ပြစ်မှုကျူးလွန်သူ ၂ ဦး၏လှုပ်ရှားမှုများကို မှတ်တမ်းတင်ထားသည့် စီစီတီဗီကင်မရာ မှတ်တမ်းများ ရယူဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အမှုစုံစမ်းဆောင်ရွက်နေစဉ် သြဂုတ်လ ၆ ရက်နေ့ ညနေ ၄ နာရီခွဲအချိန်တွင် စည်ပင်သာယာဝန်ထမ်း ၂ ဦးတို့က ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ အင်းယားကန်ဘောင် အနောက်ဘက် ကျွန်းတောစပ်ရှိ စည်ပင်အမှိုက်ပုံး အတွင်းမှ အမှိုက်များကို ကားပေါ်သို့တင်ယူစဉ် အနက်ရောင် ကြွပ်ကြွပ်အိတ်ဖြင့် ထုပ်ထားသည့်အထုပ် ၂ ထုပ်တို့ကို မသင်္ကာတွေ့ရှိကြောင်း အကြောင်းကြားသဖြင့် သွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့ရာ 9mmK တံဆိပ်ပါ ၉ မမ စတင်းကျည်တစ်ထောင့်၊ 7.65 B13 S & B တံဆိပ်ပါ ကျည်တစ်ထောင့် အပါအဝင် ပစ္စည်း(၁၆)မျိုးကို တွေ့ရှိသိမ်းဆည်း ရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါတွေ့ရှိသော ကျည် ၂ ထောင့်မှာ အခင်းဖြစ်စဉ်က ကျန်ရစ်ခဲ့သော ကျည်ဆံအခွံ၊ ကျည်ထိပ်ဖူးတို့နှင့် တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးနိုင်ရန် မှုခင်းရဲတပ်ဖွဲ့သို့ ပေးပို့ထင်မြင်ချက် တောင်းခံခဲ့ပြီး ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများအား သိမ်းဆည်းရမိသော သက်သေခံသဲလွန်စ အထောက်အထား များမှတစ်ဆင့် ဆက်စပ်စုံစမ်းခဲ့ရာ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူမှာ လှည်းကူးမြို့နယ်နေ ပြည့်ဖြိုးသူ(ခ)ပြည့်သူဖြစ်ကြောင်း စုံစမ်းသိရှိခဲ့ကြောင်း၊ ပြည့်ဖြိုးသူ(ခ) ပြည့်သူအား ဖမ်းဆီးရမိရေးအတွက် ၄င်းနေထိုင်သည့် နေအိမ်သို့ အမှုစစ်အဖွဲ့မှ သွားရောက်စုံစမ်းခဲ့ရာ ပြည့်ဖြိုးသူ(ခ)ပြည့်သူမှာ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြောင်း သိရပြီး အခင်းဖြစ်စဉ်က အသုံးပြုခဲ့သည့် ဆိုင်ကယ်နှင့်ပတ်သက်၍ စုံစမ်းရရှိခဲ့ရာ ဆိုင်ကယ်ပိုင်ရှင်မှာ လှည်းကူးမြို့နယ်နေ ဇော်ဟိန်းထက်(ခ)ပဲလေး ဆိုသူဖြစ်ပြီး ၄င်း၏ပြောပြချက်အရ ပြည့်ဖြိုးသူ(ခ)ပြည့်သူက ဆိုင်ကယ်ကို တစ်ရက်လျင် ငွေတစ်သောင်းကျပ်ဖြင့် ငှားရမ်းထားကြောင်း၊ ၄င်းဆိုင်ကယ်ကို ပြည့်ဖြိုးသူ၏ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ သက်ထက်ထံ အပ်နှံထားရာမှ ပြန်လည်ယူဆောင် လာခဲ့ကြောင်းပြောပြပြီး သက်သေခံဆိုင်ကယ် Canda 110 အမျိုးအစား ဒလက်ဘီးဆိုင်ကယ်ကို အပ်နှံပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ပြည့်ဖြိုးသူ(ခ)ပြည့်သူ၏ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ သက်ထက်၏နေအိမ်သို့ သွားရောက်ရှာဖွေရာ အခင်းဖြစ်စဉ်က ပြစ်မှုကျူးလွန်ရာတွင် အသုံးပြုခဲ့သော Space Crown စာတမ်းပါ ဆိုင်ကယ်စီး ဦးထုပ်တစ်လုံးကို တွေ့ရှိသိမ်းဆည်း ရရှိခဲ့ပါကြောင်း သက်ထက်၏ ထွက်ဆိုချက်အရ လွန်ခဲ့သော တစ်လကျော်ခန့်က ပြည့်ဖြိုးသူနှင့်အတူ မှော်ဘီမြို့နယ်၊ အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်ရှိ တွင်ခုံတွင် သွားရောက်ပြီး တွင်ခုံပိုင်ရှင်၏ သားဖြစ်သူ ရဲလေးထံတွင် အင်တာနက်ပါ လေသေနတ် ကျည်ဆံပုံလုပ်ရန်အတွက် မို(ပုံစံခွက်)လုပ်ပေးရန် အပ်နှံခဲ့ဖူးကြောင်း သိရှိရသဖြင့် အတည်ပြုစုံစမ်းခဲ့ရာ သေနတ်ကျည်ဆံပုံစံ လုပ်ရန်အပ်နှံ ထားသော်လည်း ပုံစံခွက်ပြုလုပ်ပေးရခြင်း မရှိသေးကြောင်း သိရသည်။
ရရှိသည့် သတင်းအချက်အလက်များအပေါ် တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှူးက သုံးသပ်ပြီး ညွှန်ကြားချက်အရ သိမ်းဆည်းရမိသည့် ဆိုင်ကယ်စီးဦးထုပ်မှာ စီစီတီဗီမှတ်တမ်းတွင်တွေ့ရှိရသည့် ဦးထုပ် ဟုတ်/မဟုတ် တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးခဲ့ရာ ကိုက်ညီမှုကြောင်း တွေ့ရှိရသည့်အပြင် ဇော်ဟိန်းထက်(ခ)ပဲလေးနှင့် သက်ထက်တို့အား အခင်းဖြစ်မှတ်တမ်း ဓာတ်ပုံများ၊ အခင်းဖြစ်စဉ်က အသုံးပြုသည့် မော်တော်ဆိုင်ကယ်နှင့် ဆိုင်ကယ်စီး ဦးထုပ်တို့အား ပြသပြီး တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးခဲ့ရာ စီစီတီဗီ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံအရ သေနတ်ကိုင်ဆောင်သူမှာ ပြည့်ဖြိုးသူဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုနိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ပြည့်ဖြိုးသူအား ဖမ်းဆီးရမိရေးအတွက် ၄င်းနေထိုင်သည့် ပန်းသစ္စာလမ်း၊ ဇရပ်ကွင်းကျေးရွာ၊ လှည်းကူးမြို့နယ် သို့ သွားရောက်စုံစမ်းခဲ့ရာ ပြည့်ဖြိုးသူမှာ နေအိမ်တွင်မရှိဘဲ မကွေးမြို့သို့ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရသဖြင့် အမှုစစ်အဖွဲ့မှ မကွေးမြို့သို့ သွားရောက်စုံစမ်းခဲ့ရာ ပြည့်ဖြိုးသူမှာ ၇.၈.၂၀၁၇ ရက်နေ့ ၁၂၃၀ အချိန်တွင် မကွေးမြို့၊ ပြည်တော်သာရပ်ကွက်ရှိ ဂုဏ်တည်းခိုခန်းတွင် ရောက်ရှိတည်းခို နေထိုင်ပြီး ၁၅၃၀ အချိန်ခန့်တွင် အမျိုးသားတစ်ဦးမှ လာရောက်ခေါ်ဆောင်သွားကြောင်း သိရသည်။ ဆက်လက်စုံစမ်းခဲ့ရာ ပြည့်ဖြိုးသူ(ခ)ပြည့်သူမှာ ကချင်ပြည်နယ်၊ ဖားကန့်မြို့တွင် ရောက်ရှိနေကြောင်း သတင်းရရှိသဖြင့် အမှုစစ်အဖွဲ့မှ ဖားကန့်သို့ ဆက်လက်သွားရောက်ရှာဖွေဖမ်းဆီးခဲ့ရာ ၃၀.၈.၂၀၁၇ ရက်နေ့ ၁၀၃၀ အချိန်တွင် ပြည့်ဖြိုးသူ (ခ)ပြည့်သူ(၂၆)နှစ်အား ကချင်ပြည်နယ်၊ ဖားကန့်မြို့နယ်၊ ဆိပ်မူကျေးရွာအုပ်စု(ဆိုင်းတောင်)၊ ဘဇာချောင်းကျေးရွာရှိ ၁၁၁ ကုမ္ပဏီ၏ ကျောက်စိမ်းမြေစာပုံ အနီးရှိ ပျံကျအလုပ်သမားတဲ အတွင်းမှ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါသည်။ ဖမ်းဆီးရမိသူ ပြည့်ဖြိုးသူ(ခ)ပြည့်သူ၏ ထွက်ဆိုချက်အရ ၄င်းနှင့်အတူ ပါဝင်ကျူးလွန်သူမှာ မကွေးမြို့တွင်နေထိုင်သူ ကျော်ကျော်ခိုင်(ခ)ကျော်ခိုင်(ခ)ကောင်းကောင်း ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ပြစ်မှုကျူးလွန်စဉ်က အသုံးပြုသည့် သေနတ်ကို အခင်းမဖြစ်မီ ဇူလှိုင်လ ၂၈ ရက်နေ့က တနင်္သာရီတိုင်း ဒေသကြီး၊ ထားဝယ်မြို့၊ ဝဲကျွန်းညောင်ရမ်းတောင်ရပ်ကွက်နေ စောမြတ်သူ(ခ)မြတ်သူအား ဝယ်ယူခိုင်းခဲ့ကြောင်း၊ ပစ္စတိုသေနတ် ၁ လက်နှင့် ကျည် ၁၄ တောင့်ကို ထိုင်းဘတ်ငွေ ၃၂၀ဝ၀၊ (မြန်မာငွေကျပ် ၁၃၈၀ဝ၀ဝ)ဖြင့် ဝယ်ယူပေးခဲ့ကြောင်း၊ ဝယ်ယူလာသည့် ပစ္စတိုသေနတ် အသုံးပြုရာတွင် အသံမမြည်စေရန် Facebook မှ ကူးယူထားသော အသံတိတ် ကိရိယာပြုလုပ်နည်း ပုံစံအတိုင်း သံပိုက်ဖြင့် ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း ထွက်ဆိုသည့်အပြင် အဆိုပါသေနတ်ကို ကျော်ကျော်ခိုင်ထံ အပ်နှံထားခဲ့ကြောင်း သိရှိရသဖြင့် အမှုစစ်အဖွဲ့မှ မကွေးမြို့သို့သွားရောက်ခဲ့ပြီး မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် ပူးပေါင်းဖမ်းဆီးခဲ့ရာ ၄.၉.၂၀၁၇ ရက်နေ့ ဝ၉၄၅ အချိန်တွင် ကျော်ကျော်ခိုင်(ခ)ကျော်ခိုင် (ခ)ကောင်းကောင်း(၃၀)နှစ်အား မကွေးမြို့၊ အဝေးပြေးကားကြီးဝင်းအတွင်းရှိ ရွှေပွင့်ဖြူ စားသောက်ဆိုင်တွင် ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ကျော်ကျော်ခိုင်၏ ထွက်ဆိုချက်အရ ပြစ်မှုကျူးလွန်စဉ်က အသုံးပြုသည့် သေနတ်မှာ မကွေးမြို့၊ မြို့ဟောင်း ၄ ရပ်ကွက်၊ စံပယ်လမ်းရှိ ရေမရှိသော ရေမြောင်းအတွင်းတွင် ကြွပ်ကြွပ်အိတ်နှစ်လုံးဖြင့်ထည့်၍ ဝှက်သိမ်းထားကြောင်း ထွက်ဆိုသဖြင့် သွားရောက်ရှာဖွေ သိမ်းဆည်းရာ အဆိုပါနေရာတွင် ကြွပ်ကြွပ်အိတ်ဖြင့် ထုပ်၍ဝှက်သိမ်းထားသော လက်လုပ်အသံတ်ိတ် ကိရိယာ တပ်ဆင်လျက် Made in W.Germany WAITHER CARL WALTHER Waffen Fabrik Uln/80 Model PP. Cal 7.65 MM စာသားပါ စတီး/အနက်ရောင်စပ် .၃၂ ပစ္စတိုသေနတ် ၁ လက်နှင့် ၄င်းကျည်အိမ် ၁ ခု၊ 7.65 ကျည် ၄ တောင့်တို့ကို တွေ့ရှိသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
သေနတ်ဝယ်ပေးသူ စောမြတ်သူ(ခ)မြတ်သူအား ဖမ်းဆီးရမိရေးအတွက် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ ၅.၉.၂၀၁၇ ရက်နေ့ ၁၂၄၅ အချိန်တွင် ထားဝယ်မြို့မရဲစခန်းမှ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက စောမြတ်သူ(ခ)မြတ်သူ၊ (၂၇)နှစ်နှင့် သေနတ်ဝယ်ရာတွင် လိုက်ပါသူ မင်းမင်း(ခ)မင်းဟန်၊ (၃၆)နှစ်တို့နှစ်ဦးအား တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ ထားဝယ်မြို့၊ ၀ဲကျွန်းညောင်ရမ်း တောင်ရပ်ကွက်တွင် ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများ၏ ထွက်ဆိုချက်များအရ ပြစ်မှုကျူးလွန်ရသည့် အကြောင်းအရင်းမှာ ပြည့်ဖြိုးသူ(ခ)ပြည့်သူ(ခ)ကိုပြည့်သည် နယ်စပ်တွင် ဆိုင်ကယ်နှင့် ဆိုင်ကယ်အပိုပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရောင်းချရန် ငွေကြေးလိုအပ်နေသည့်အပြင် ကျော်ကျော်ခိုင်(ခ)ကျော်ခိုင်(ခ) ကောင်းကောင်းမှာလည်း ဖဲလောင်းကစားရာမှာ ရှုံးသဖြင့် ဖဲကြွေးအပါအဝင် အခြားအကြွေးငွေ ၁၂၅ သိန်းပေးဆပ်ရန် လိုအပ်နေသဖြင့် ၄င်းတို့နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီး Money Changer ဆိုင်များမှ ငွေများလုယက်ရန် စီစဉ်ခဲ့ရာ ကျောက်တံတားမြို့နယ်ရှိ OK ZWE Money Changer အား လုယက်ရန် စီစဉ်ခဲ့သော်လည်း လူစည်ကားသဖြင့် လုယက်ခဲ့ခြင်း မရှိခဲ့ဘဲ လုယက်မှု ကျူးလွန်ရန် လွယ်ကူသော မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ၉ မိုင် အိုရှင်စင်တာရှေ့ရှိ Farmer Money Changer ဆိုင်မှငွေများ လုယက်ရန် ကြံစည်ခဲ့သည်ဟု စစ်ဆေးပေါ်ပေါက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့အနေဖြင့့်် ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများကို လက်နက်ဥပဒေဖြင့်ပါ ထပ်မံအရေးယူ ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရသည်။
Posted in CrimeTagged လုယက်မှုLeaveaComment on Farmer Money Changer တွင် လုယက်ရန်ကြံစည်၍ သေနတ်ပစ်ဖောက် ထွက်ပြေးသူ နှစ်ဦးနှင့် သေနတ်ရောင်းချပေးသူ နှစ်ဦးတို့အား ရက် ၃၀ အတွင်း ဖမ်းမိ
စတိုးဆိုင်များအတွင်း ၀င်ရောက်လုယက်သူ အချို့ကို သက်သေခံ ပစ္စည်းများနှင့်အတူ တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ-မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့)
စမ်းချောင်းမြို့နယ်ရှိ g & g စတိုးဆိုင်အတွင်း ၀င်ရောက်လုယက်သူများကို ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခဲ့ရာ အခြားလုယက်မှုများ ထပ်မံပေါ်ပေါက်ခဲ့ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှ သိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ သြဂုတ် ၁၁ ရက် နံနက် ၂ နာရီ မိနစ် ၄၀ ခန့်က စမ်းချောင်းမြို့နယ် စမ်းချောင်း (မြောက်) ရပ်ကွက် စမ်းချောင်းလမ်းရှိ g & g စတိုးဆိုင် အရောင်းဝန်ထမ်း တစ်ဦးဖြစ်သူ ကို…. သည် အခြားအရောင်းဝန်ထမ်း အမျိုးသား တစ်ဦးနှင့်အတူ ဆိုင်အတွင်း ဈေးရောင်းနေစဉ် Mask အနက်ရောင် တပ်ဆင်ထားသူ လေးဦးမှာ ဆိုင်အတွင်းသို့ ၀င်ရောက်လာပြီး ဓားဖြင့်ထောက်ကာ ကျပ်လေးသိန်းခန့်နှင့် အရောင်းဝန်ထမ်း နှစ်ဦးထံမှ ရွှေလက်စွပ်တစ်ကွင်း၊ လက်ကိုင်ဖုန်း နှစ်လုံးနှင့် ဖုန်းငွေဖြည့်ကတ်မျိုးစုံ တန်ဖိုးကျပ် ၁၀၅၄၀၀၀ ခန့်တို့ကို လုယက်ကာ ဆိုင်ရှေ့တွင် အသင့်ရပ်ထားသော အငှားယာဉ်ဖြင့် မောင်းနှင်ထွက်ပြေးသွားကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကို သက်ဆိုင်ရာ စမ်းချောင်းမြို့မရဲစခန်းသို့ သွားရောက်တိုင်တန်းခဲ့ပြီး ရဲစခန်းက (ပ) ၃၄၅/၂၀၁၇၊ ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၃၉၂ ဖြင့် အမှုဖွင့်ကာ ကျူးလွန်သူများအား ဖမ်းဆီးရမိရေး ဆောင်ရွက်ရာ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများ ဖြစ်သည့် စည်သူလွင် (၂၈ နှစ်)၊ အာယုကျော် (၂၃ နှစ်)၊ ဖိုးလပြည့် (ခ) အောင်ပြည့်မြတ် (၁၉ နှစ်) နှင့် ကျော်ထူး (ခ) လှမျိုးနိုင် (၁၈ နှစ်) တို့အား သြဂုတ် ၁၁ ရက်တွင် ၎င်းတို့၏ နေအိမ်များ၌ လုယက်ခဲ့သည့် ပစ္စည်းများနှင့်အတူ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ထပ်မံစစ်ဆေးချက်အရ ၎င်းတို့သည် သြဂုတ် ၁၁ ရက် နံနက် ၁ နာရီခန့်က မရမ်းကုန်းမြို့နယ် အင်းစိန်လမ်းနှင့် ဦးရေခဲလမ်းထောင့်ရှိ g & g စတိုးဆိုင်အတွင်း ၀င်ရောက်ပြီး အရောင်းဝန်ထမ်း အမျိုးသမီး နှစ်ဦးအား ဓားဖြင့်ထောက်ကာ ကျပ် ၉၈၀၀၀၊ လက်ကိုင်ဖုန်းနှစ်လုံးနှင့် ရွှေလက်စွပ် တစ်ကွင်းတို့အား လုယက်ခဲ့သည်ဟု ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။
ထို့ပြင် စည်သူလွင်၊ ကျော်ထူး (ခ)လှမျိုး နိုင်တို့နှစ်ဦးသည် ပြောင်ကြီး (ခ) ကျော်မိုးဝေ၊ ရှောင်ပေါင်း (ခ) ဝေရှောက်ပေါင်း၊ ရဲတင့် ဆွေ (ခ) ၀က်ကြီးဆိုသူတို့နှင့်အတူ မတ် ၁၈ ရက် နံနက် ၄ နာရီခန့်က ယာဉ်တစ်စီးဖြင့် အလုံမြို့နယ် ဌာနရပ်ကွက် ငုဝါလမ်းထိပ် အနီးရှိ g & g စတိုးဆိုင်အတွင်း ၀င်ရောက်၍ အရောင်းဝန်ထမ်း အမျိုးသမီးအား ဓားဖြင့်ထောက်ကာ ကျပ် ၂၅၄၀၀၊ ဖုန်းငွေဖြည့်ကတ် မျိုးစုံနှင့် လက်ကိုင်ဖုန်း တစ်လုံးတို့အား လည်းကောင်း၊ ကျော်ထူး (ခ) လှမျိုးနိုင်၊ အာယုကျော်တို့ နှစ်ဦးသည် ပြောင်ကြီး (ခ) ကျော်မျိုးဝေ၊ ဆိုးပေ (ခ) အောင်ဖြိုးကျော်၊ ဇင်ကိုထူး (ခ) အငယ်ကောင်တို့နှင့်အတူ သြဂုတ် ၁ ရက် နံနက် ၂ နာရီခန့်က ပရိုဘောက်ယာဉ်ဖြင့် မရမ်းကုန်းမြို့နယ် အမှတ် (၁) ရပ်ကွက် ကျန်စစ်သားလမ်းရှိ g & g စတိုးဆိုင်အတွင်းသို့ဝင်၍ ဆိုင်ဝန်ထမ်းနှစ်ဦးအား ဓားဖြင့်ထောက်ကာ ကျပ် ၃၅၀၀၀၀၊ လက်ကိုင်ဖုန်း နှစ်လုံးနှင့် ရွှေလက်စွပ် တစ်ကွင်းတို့အား လည်းကောင်း လုယက်ခဲ့သည်ဟု စစ်ဆေးပေါ်ပေါက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဆက်လက်စစ်ဆေးရာ ဖိုးလပြည့် (ခ) အောင်ပြည့်မြတ်သည် ဆိုးပေ (ခ) အောင်ဖြိုးကျော်၊ ရှောင်ပေါင် (ခ) ဝေရှောင်ပေါင်းတို့နှင့်အတူ ဇူလိုင်လအတွင်းက မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းရှိ g & g စတိုးဆိုင် အတွင်းဝင်ရောက်၍ ဆိုင်ဝန်ထမ်းအား ဓားဖြင့်ထောက်ကာ ကျပ် ၄၀၀၀၀၀၊ ဖုန်းငွေဖြည့်ကတ် မျိုးစုံတို့အား လုယက်ခဲ့သည်ဟု ထပ်မံစစ်ဆေး ပေါ်ပေါက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ကျူးလွန်မှုတွင် ပါဝင်သူများအနက် သြဂုတ် ၁၂ ရက်တွင် မရမ်းကုန်းမြို့နယ်နေ ဇင်ကိုထူး (ခ) အငယ်ကောင် (၂၄ နှစ်)၊ ရဲတင့်ဆွေ (ခ) ၀က်ကြီး (၂၀ နှစ်) တို့အား ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီး ရှောင်ပေါင်း (ခ) ဝေရှောင်ပေါင်းနှင့် ဆိုးပေ (ခ) အောင်ဖြိုးကျော်တို့ နှစ်ဦးအား ဆက်လက် ဖမ်းဆီးရမိရေး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
Posted in CrimeTagged စမ်းချေင်း, လုယက်မှုLeaveaComment on စမ်းချောင်းမြို့နယ်ရှိ g & g စတိုးဆိုင်အတွင်း ၀င်ရောက်ကာ ဓားထောက် လုယက်သည့်အဖွဲ့အား ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးရာ အခြားလုယက်မှုများ ထပ်မံပေါ်ပေါက်